शक्तिशाली गणेशले वहानको रुपमा किन मुसालाई रोजे? – Suchana Hub
शक्तिशाली गणेशले वहानको रुपमा किन मुसालाई रोजे?
मुसा सानो हुन्छ तर बहुतै चलाख । मुसाले समुन्द्र पारीबाट अन्नहरूको बिउ ल्याएर प्राणीहरुको ज्यान बचाएको हो भन्ने धार्मिक मन्थन पाईन्छ । अक्सर मान्छेहरु सानो कुराहरुलाई आनाकानी गर्छन् । तर हरेक कुराको आकार हेरेर त्यसको बारेमा आँकलन गर्नु गलत हुन्छ भन्छ भन्ने भाव भगवान गणेशको वहान मुसाले दिन्छ। भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
Previous मंगलबारको मौसम पुर्वानुमान, यी स्थानमा भारी वर्षा
Next मंगलबार जन्मिएका मानिसहरुको भविष्य कस्तो हुन्छ ?